८–१०औँ तहका झन्डै दुई दर्जन विधाका चिकित्सक तथा ७–१०औँ तहका ६ विधाका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक – Health Post Nepal
८–१०औँ तहका झन्डै दुई दर्जन विधाका चिकित्सक तथा ७–१०औँ तहका ६ विधाका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक
२०७६ साउन ५ गते १७:३४
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका विभिन्न तह र विधाका गरी ५ सयभन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको सूचीमा आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका झन्डै दुई दर्जन विधाका चिकित्सक छन् भने बाँकी सातौँदेखि १०औँ तहसम्मका अधिकृत कर्मचारी छन् ।
२६ असारदेखि २ साउनसम्म विभिन्न मितिमा भएका नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कुल १२ विधाका समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको हो । समायोजित हुनेमा सबैभन्दा बढी आठौँ तहका आयुर्वेदिक चिकित्सक ८८ जना छन् । त्यसपछि, कर्मचारीतर्फ सातौँ तथा आठौँ तहका ६४ जना जनस्वास्थ्य अधिकृतको समायोजन भएको छ । त्यस्तै, नवौँ तहका कन्सल्टेन्ट सर्जन र १०औँ तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जन गरी ३१ जनाको समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको छ । नवौँ तहका ३ जना न्युरोसर्जन समायोजित भएका छन् । १०औँ तहका ३ जना वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट युरो सर्जनको पनि समायोजन सूची आएको छ ।
नवौँ र १०औँ तहका ३१ जना कन्सल्टेन्ट सर्जन तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जनको समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, पेडियाट्रिक सर्जनतर्फ नौ र १०औँ तह गरी जम्मा तीनजना समायोजित भएका छन् । त्यसगरी, नवौँ र १०औँ तहका २३ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको पनि समायोजन सूची सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, नवौँ र १०औँ तहकै ३७ जना कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्टको पनि समायोजन सूची आएको छ ।
त्यसैगरी, नवौँ र १०औँ तहका कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन, क. मेडिकल जनरलिस्ट, क. मे. अंकोलोजिस्ट, क. चेस्ट फिजिसियन, क. नेफ्रोलोजिस्ट, क. न्युरोलोजिस्ट, क. कार्डियोथोरासिक सर्जन, क. ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट सर्जन, प्लास्टिक सजर्नको पनि समायोजन टंगो लागेको छ ।
त्यस्तै, सातौँ र आठौँ तहका फिजियोथेरापिस्ट तथा आठौँ तहका होमियोप्याथी चिकित्सकको समेत समायोजन गरिएको छ । सातौँ र आठौँ तहका मेडिकल रेकर्डर, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षकको समेत समायोजन सूची आइतबार नै सार्वजनिक भएको छ । नवौँ र १०औँ तहको फरेन्सिक मेडिकल अधिकृतको पनि समायोजन सूची आएको छ ।
नर्सिङतर्फ सातौँ तहका कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत तथा आठौँ तहका वरिष्ठ कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत गरी १४ जनाको समायोजन सूची आएको छ । त्यस्तै, १०औँ तहका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा नवौँ तहका उपस्वास्थ्यप्रशासक गरी ४ जना समायोजित भएका छन् ।
समायोजनमा परेका चिकित्सक तथा अधिकृत कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघअन्तर्गत समायोजित भएका छन् भने केहीलाई संघअन्तर्गत पुलमा राखिएको छ । केही चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई प्रदेशअन्तर्गत समायोजन गरिएको छ ।
यस्तो छ समायोजन सूची